October 8, 2019 - Myitter
October 8, 2019 Myitter 0
အောင်ကြီးရှေ့နေက ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်ကို နိုင်လွတ်လုံဥပဒေဖြင့် ပြန်လည်တရားစွဲမည် Wisdom Hill ပုဂ္ဂလိကမူကြိုကျောင်း ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်ကို နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် လုံခြုံမှုကို အကာ အကွယ်ပေးရေးဥပဒေဖြင့် အောင်ကြီး၏ရှေ့နေများအနက် တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်စုဒါလီအောင်က ပြန်လည်တရားစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့ နေဦးသိန်းသန်းဦးက ပြောသည်။ ဗစ်တိုးရီးယားအမှုတွင် တရားခွင်ထွက်ဆိုချက်များအပေါ် ဒေါ်စုဒါလီ အောင်အနေဖြင့် […]
ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့အတူ အဖမ်းခံရတဲ့ လေးဘာသာဂုဏ်ထူး ရှင် ညီလေး ငြိမ်းချမ်းကို ဆိုတာ…. လတ်တလော လူမှုကွန်ရက်အပါအဝင် သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ရေပန်းစားသွားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ နဲ့ လူငယ်လေးနှစ်ဦးကို မူးယစ်ဆေးဝါးသံသယရှိမှုနဲ့ လူမြင်ကွင်း မြန်မာပလာဇာမှာ လက်ထိပ်ခပ် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မူးယစ်ဆေးပြားလို့ ယူဆရတဲ့ […]
ကမ္ဘာ့ တိုက်ရည် အကောင်းဆုံး ရုရှားထုတ် တိုက်လေယာဉ်ကို ပထမဆုံး ၀ယ်ယူတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ မြန်မာ
ရုရှနိုင်ငံဟာ ၎င်းရဲ့ နောက်မျိုးဆက် SU-57 ဝေဟင်ပိုင်စိုး တိုက်လေယာဉ်တွေအတွက် အဝယ်အမှာစာတွေ အများအပြား ရရှိနေပါတယ်။ ဒီ မျိုးဆက်သစ်လေယာဉ်တွေကို ၂၀၂၅ မှာ အစီးရေ ရ၀ ဖြန့်ကြက်နိုင်ဖို့ ရုရှနိုင်ငံဟာ ၂၀၁၉ ဇူလိုင်လကစပြီး အများအပြား ထုတ်လုပ်နေတာပါ။ ဒီအတွက် ကြီးမားတဲ့ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကို ကာမိအောင် […]
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပနေစဉ် မိုးကြိုးပစ်လို့ ကစားသမားတစ်ဦး သေဆုံး RIP ပါ ရာဇဂြိုလ်မြို့ ၊ အောက်တိုဘာ . ၈ ရာဇဂြိုလ် ကျေးရွာဖိတ်ခေါ်ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် အုပ်စုပွဲစဉ် (၃) အဖြစ်ယမန်နေ့ ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန်တွင် ရာဇဂြိုလ်ဘောလုံးကွင်း၌ မြစိမ်းအသင်း (Singgial) နှင့် […]
မနက်ဖြန်ဆိုတာဝေးသေးတယ်သေခြင်းတရားကတော့အချိန်နဲ့အမျှဘဲမန္တလေးမြို့ လမ်း ၆၀ ပြည်ကြီးတံခွန် မင်္ဂလာလမ်းနားဖြစ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်း သင်္ခါရသဘောလူငယ်များဆိုင်ကယ်အမြန်စီးခြင်းရှောင်ကျင်ကြပါစေ။မနက်ဖြန်ဆိုတာဝေးသေးတယ်သေခြင်းတရားကတော့အချိန်နဲ့အမျှဘဲမန္တလေးမြို့ လမ်း ၆၀ ပြည်ကြီးတံခွန် မင်္ဂလာလမ်းနားဖြစ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်း သင်္ခါရသဘောလူငယ်များဆိုင်ကယ်အမြန်စီးခြင်းရှောင်ကျင်ကြပါစေ။ မနက်ဖြန်ဆိုတာဝေးသေးတယ်သေခြင်းတရားကတော့အချိန်နဲ့အမျှဘဲမန္တလေးမြို့ လမ်း ၆၀ ပြည်ကြီးတံခွန် မင်္ဂလာလမ်းနားဖြစ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်း သင်္ခါရသဘောလူငယ်များဆိုင်ကယ်အမြန်စီးခြင်းရှောင်ကျင်ကြပါစေ။ Photo – Myint Myanmar Unicode မနကျဖွနျဆိုတာဝေးသေးတယျသခွေငျးတရားကတော့အခြိနျနဲ့အမြှဘဲမန်တလေးမွို့ လမျး ၆၀ […]
“နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော် ခွင့်မယူသည့် ခွင့်ရက်မပျက်ဆုရ ဆရာမများအား ဆုချီးမြှင့်” 😱 မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးလောကတွင် ၁၀ နှစ်အထက် ခွင့်ရက်မပျက်ဘဲ သင်ကြားရေးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေသည့် ဆရာ ဆရာမများစွာရှိနေပြီး နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် ခွင့်ရက်မပျက်ခဲ့သူ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးမှ အလယ်တန်းပြဆရာမ ငါးဦးအား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက […]
ယာဉ် (၇)စီးပါ သစ်မှောင်ခိုယာဉ်တန်း ဖမ်းမိသော်လည်း တရားခံအားလုံး ထွက်ပြေးသွား
ယာဉ် (၇)စီးပါ သစ်မှောင်ခိုယာဉ်တန်း ဖမ်းမိ၍ ထွက်မပြေးရန် သေနတ်ပစ်ဖောက်ခဲ့သော်လည်း ယာဉ်တစ်စီးဖြင့် တရားခံအားလုံးထွက်ပြေးသွား… ကနီ၊ အောက်တိုဘာ ၈ – ဌာနဆိုင်ရာများပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် မုံရွာ-ယာကြီး-ကလေးဝကားလမ်း တွင် ယာဉ် ၇ စီးပါ သစ်မှောင်ခိုယာဉ်တန်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့၍ ထွက်မပြေးသွားစေရန် သေနတ်ပစ်ဖောက်ခြောက်လှန့်ဟန့်တားခဲ့သော်လည်း သစ်မှောင်ခိုယာဉ်တစ်စီးနှင့် တရားခံများအားလုံး […]
ဆွမ်းတော် ကပ်ရာတွင် သတိမူသင့်သည့်် အလွဲလေးများ
ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအများရဲ့ အလွဲတွေထဲက နောက်ထပ်အလွဲတစ်ခုက ဘုရားဆွမ်းတော် ကပ်တာလေးပါ။ ဆွမ်းတော်ကပ်လှူတာကို ပြောတာပါ။ နတ်တင်သလိုမျိုး ဘုရားဆွမ်းတော်တင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဆွမ်းတော်ကပ်တာ ဆိုတဲ့အတွက် သက်ရှိထင်ရှား ဘုရားရှင်ကို ရည်ရွယ်အာရုံပြုပြီး ကပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားက ဘာမှ မပြောဘူးဆိုပြီး ဖြစ်သလိုလေး တင်သွားတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချို့ရဲ့ […]
ဇာတ်သဘင် အဖွဲ့သားတွေကို သီတင်းကျွတ်မုန့်ဖိုးဝေနေတဲ့ စေတနာကောင်းတဲ့ မင်းသားဖိုးချစ် (ရုပ်သံ)
သီတငျးကြှတျမုနျ့ဖိုးဝနေတေဲ့ မငျးသားဖိုးခဈြ ဇာတျသဘငျ အဖှဲ့သားတှကေို သီတငျးကြှတျမုနျ့ဖိုးဝနေတေဲ့ စတေနာကောငျးတဲ့ မငျးသားဖိုးခဈြ (ရုပျသံ) ပွညျသူအခဈြတျော ဇာတျမငျးသားခြော ဖိုးခဈြရဲ့ လေးစားဖှယျကောငျးတဲ့ အဓိကအခကျြကတော့ အလှူအတနျး လကျမနှေးဘဲ အတူတူတှဲလုပျနတေဲ့ ဇာတျအဖှဲ့သားတှကေို အမွဲကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျတတျတဲ့ စိတျထားလေးပါ ။ သဘငျအစညျးအရုံး ဥက်ကဋ်ဌဖွဈတဲ့ မငျးသားဖိုးခဈြကတော့ အခကျခဲမြားစှာရှိနတေဲ့ သဘငျလောကသားတှေ […]